Abacebisi, iikontraki kunye nabasebenzi: Sisingise phi? | Martech Zone
Abacebisi, iikontraki kunye nabasebenzi: Sisingise phi?
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 6, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Rhoqo, ndisiva isikhalo sentlungu xa sibhenela kubacebisi bangaphandle okanye kwiikontraki ukuze sigqibe umsebenzi. Yimeko ethe-ethe-ngamanye amaxesha abasebenzi baziva ngathi bayangcatshwa ukuba uya ngaphandle. Ngokunyanisekileyo, kukho ijika lokufunda kunye neendleko ezongezelelweyo zokuya ngaphandle. Kukho izibonelelo, nangona kunjalo.
Ndiyayithanda le plaque ukusuka Ukuphelelwa lithemba:
Ukuhlekisa ecaleni, abacebisi kunye neekhontrakthi bayayiqonda inyani yokuba xa bengasebenzi, abasayi kubuya. Ixesha. Lithuba elinye lokufaka ukuzithemba kumthengi ukuze ufumane umsebenzi owongezelelweyo. Kananjalo, ayikho enye imicimbi enxulumene nabasebenzi- iholide, izibonelelo, uphononongo, ukucebisa, iindleko zoqeqesho, ezopolitiko, njl.
Abasebenzi lutyalo-mali lwexesha elide. Oku kunokuvakala kungengomntu, kodwa kufana nokuthenga indlu okanye ukurenta indlu. Indlu ifuna ingqwalaselo engakumbi eya kuthi ngethemba ihlawule ekuhambeni kwexesha. Kodwa ngaba ihlawula ngokwenene? Ukuba unengeniso apho abantu bengahlali ngaphezulu kweminyaka embalwa, ngaba ufumana imbuyekezo yakho kutyalo-mali?
Abacebisi kunye neekhontraktha banoluvo olunzulu ngenkonzo yabathengi. Ungumthengi wabo kwaye ezona njongo zabo kukukukholisa. Ngamanye amaxesha oku akunjalo kubasebenzi. Abasebenzi banolindelo kubaqeshi babo-ngamanye amaxesha bomelele kunakwelinye icala.
Njengoko izibonelelo zokhathalelo lwempilo zikhula kwaye nengeniso yabasebenzi iyaqhubeka nokuba yingxaki, ndiyamangaliswa kukuba singasebenzisi iikontraki kunye nabacebisi ngakumbi nangakumbi ukwenza umsebenzi wethu. Kubuhlungu oku ngandlela thile, kodwa kuyahlulahlula ingqolowa kumququ. Ndicinga ukuba kuthatha umbutho owomeleleyo ngendlela emangalisayo ukwakha isiseko sabasebenzi esimnandi kangangokuba akufuneki ujonge ubuchule bangaphandle- kwaye uhlawula ngokwaneleyo ukuba ungaze ube nexhala lokuba bayahamba. Ngaba ikhona inkampani enjalo?
Imida ihlala kwi-01: Imida ngokuchasene neNtengiso ye-imeyile yeAmazon
Imfihlakalo yeGoogle PageRank isonjululwe
Epreli 6, 2007 ngo-9: 50 AM
Ngelishwa uDoug, azikho ezininzi iinkampani ezikhoyo ezinje, ubuncinci andazi ngazo. Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha inkampani ifuna ukudibanisa izinto kancinci kwaye ifumane uncedo lwangaphandle, ngamanye amaxesha abasebenzi banokuvumela uninzi lweminye imicimbi ingene kwindlela yokusebenza kwabo njengokuhlawula, ukukhula kwamakhondo emisebenzi, kunye nokhathalelo lwezeMpilo ukubiza ezimbalwa. Njengoko utshilo ngamanye amaxesha ixesha elide lotyalo-mali aluhlawuli.
Epreli 6, 2007 ngo-12: 35 PM
Yintoni iinkampani ezihlala zisilela ukuyibona kukuba zikhupha iiprojekthi ezintsha nezinomdla kubacebisi ngelixa zincamathisela abasebenzi bazo ngoku nomsebenzi wolondolozo. Oku kuyaphikisana nembono yokuba abasebenzi batyala ixesha elide. Inxalenye yento endiyithandayo ngokuba ngumcebisi kukuba bekukho ithuba elihle kakhulu lokuba yonke iprojekthi ingandibonisa izinto ezintsha.
Ngokubhekiselele kubacebisi ukuba banqunyulwe xa bengasebenzi, oko kuhlala kungenzeki kwakamsinya ngokwaneleyo. Ke baphela bengenzi nto kwaye ngelixa behlawulwa. Oku kubangela ingqumbo phakathi kwabasebenzi.
Epreli 6, 2007 ngo-12: 32 PM
Ukusuka kumbono womqeshwa, ndicinga ukuba ngamanye amaxesha kuya kufuneka ujonge ngaphaya kwamanani malunga nokuba yintoni egcina umqeshwa ejikeleze.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo bendisebenza njengonokontraka ozimeleyo kwifemu yabacebisi ngezopolitiko. Ndazithengela eyam i-inshurensi yezempilo kwaye andabinaso isicwangciso somhlala-phantsi. Umsebenzi ndandiwujonga “njengonyawo lwam emnyango” kwezopolitiko. Khange isebenze njalo. Kodwa andizisoli. Ngapha koko, ndandikuthanda ukusebenza apho. Umphathi wam wayendithembile, engandijonganga egxalabeni. Ngokwasemthethweni akakwazanga ukufumanisa ukuba ndisebenza kweyiphi iiyure (emva koko kwezopolitiko usebenza 24/7).
Ngoku ndisebenza njengomqeshwa kwiarhente ye-SEM. Ndiyichithile i-inshurensi yezempilo b / c yomyeni wam ibingcono kwaye inkampani sisiqalo ngoko akukho zibonelelo. Umvuzo wam ungaphantsi kwe-5k kunale ndiyenzileyo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Kodwa uyazi ntoni? Ndiyawuthanda umsebenzi. Abantu endisebenza nabo balungile kwaye kuncinci kakhulu umdlalo weqonga. Sinexesha lokuguquguquka elimangalisayo b / c lokukhulisa abantwana liyaphambana nesikolo nayo yonke into.
Andiyi kuyikhanyela ukuba imali ilungile. Kodwa ingcinga yokubuyela kwindawo yesiqhelo yomsebenzi-ewe, andikwazi nokuyiqonda-ngayo nayiphi na imali. B / c Ndonwabile. Kwaye ngekhe ubhale oko kwintlawulo.
Epreli 6, 2007 ngo-2: 47 PM
Abanye abantu bacinga ukuba ukuba kuthabatha ibhinqa elinye iinyanga ezili-9 ukuba nomntwana, banokuqesha abacebisi abasetyhini abasi-8 kwaye ngandlela thile bavelise umntwana kwinyanga enye.
Ngamanye amaxesha, ayisebenzi nje njengoko kulindelwe.
Epreli 7, 2007 ngo-9: 36 AM
Njengomcebisi, ndicinga ukuba kuhle. Ewe ayizinzanga, kodwa ivumela inkululeko engakumbi, kwaye ndiza kukhetha umphathi wam. Kuya kufuneka ndizithengele izibonelelo zam (ezingezizo ezimbi- ndiseCanada kodwa ndiyaqonda ukuba kuyabiza kakhulu kwezinye iindawo).
Ndicinga ukuba ixhomekeke kwindima. Ndingumcebisi wewebhusayithi. Uninzi lwabantu ludinga uyilo ngokutsha rhoqo kwiminyaka embalwa emva koko lufumane i-jr. izixhobo zokugcina. Iyasebenza. Ezinye iindima zifuna isigxina. Ndicinga ngomcebisi wam wezezimali- andifuni ukuba abe yikontrakta okanye umnyango ojikelezayo wamakhwenkwe ahlukeneyo. Ezinye iindima zidinga uzinzo.
Epreli 7, 2007 ngo-10: 08 AM
Ndiyavumelana nokwenziwa ngokubanzi ukuba kwiimeko ezininzi, umcebisi uya kuqhutywa ngakumbi kwaye anikezele ngeenkonzo ezingcono kubathengi kunabasebenzi bangaphakathi. Abasebenzi abenza kakubi bahlala beyile ndlela kuba abawenzi umsebenzi abawuthandayo kwaye bagqwesa, abavuzwa ukuba bayawenza okanye abayi kohlwaywa xa beqhuba kakubi. (Ngokuqinisekileyo, zikho ezinye izizathu ezizigidi, kodwa ndenza ngokubanzi apha).
Kodwa ubudlelwane bokubonisana bunokubekwa nakwezo mizila. Ndicinga ukuba uncedo kukuba ngokungagqibekanga, uqesha umcebisi ukuba enze into ethile ekucingelwa ukuba ulungile kuyo kwaye uyakuthanda ukuyenza. Kwaye kukho umvuzo othe ngqo / isohlwayo somsebenzi owenziweyo… akukho ndlela uza kumisa ngayo intlawulo yomqeshwa kwimveliso ethunyelwe kade. Kwaye abasebenzi ngokubanzi bayazi ukuba banomsebenzi nokuba bathini… ukuba imveliso iyathunyelwa ngexesha abanokulindela ukunyuswa nge-4%, ngelixa umcebisi ejonge phambili ekusebenzeni ngaphezulu kwendlela okanye isivumelwano esihle sokugcina.
Ngokuqinisekileyo baninzi abacebisi abangalunganga phaya, kwaye isisu sam sivakalelwa kukuba kunzima ukufumana umcebisi omkhulu njengoko kunjalo ukufumana umsebenzi omkhulu. Ndicinga ukuba ufumana enye enkulu kuzo, uhamba nayo. Kwaye ukuba unamathele kokubi kuyo nayiphi na, kuya kufuneka uqhubeke.
Iposi enkulu uDoug… okuninzi okucinga ngako, kunye nento esengqondweni yam kakhulu kuba uninzi lwabathengi bam bakwisikhundla apho bazama ukuqonda ukuba bayandiqesha na njengomcebisi okanye baqeshe omnye umntu njengomqeshwa.
Epreli 11, 2007 ngo-9: 17 AM
Inqaku elinomdla kakhulu. NjengoMncedisi oNyanisekileyo, ndingusonkontileka ngakumbi ngentwana nje yomcebisi. Inye into ephazamisayo kuthi kukucinga kwabaqeshi abafuna umqeshwa, kodwa bafuna ukubahlawula njengonokontraka ukunqanda irhafu. Uxolo, kodwa awufumani khekhe lakho kwaye uyitye, nawe. Njengomnini weshishini, andingomqeshwa. Ukuba umthengi ufuna ndenze njengamnye (ndamkele ii-odolo ezikhutshiweyo, ndibekho kwi-beck yabo kwaye nditsalele umnxeba, amandongomane ahlawulelweyo), emva koko baya kundibhatala njengomqeshwa, oko kuthetha ukuba kufanelekile Ngelixa, ubulumko bexesha, ubulumko bokuhlawula, izibonelelo-zobulumko kunye neendleko-ewe (ewe, abasebenzi bafumana izixhobo zabo behlawulwa kwaye iindleko zibuyiselwa). Ukuba abafuni ukuyenza loo nto, kuya kufuneka ke baqale ukwamkela inyani yokuba iikontraki ayisiyondlela yokuphepha ukulandela umthetho, kwaye kuya kubakho ukurhweba okunje ngokuba ngabanini bamashishini, Iikontraki ziya kuhlawulisa amaxabiso obuchwephesha abonisa ubuchule babo, ulwazi kunye nexabiso, kwaye oko kuya kugcina ishishini labo linenzuzo.